Ukuhlala e-B&B De Lieve Wies enobungani.
Boxtel, Noord-Brabant, i-Netherlands
Uzohlala epulazini elithi 'De Lieve Wies', elisendaweni ebanzi. Le ndawo ingamamitha angama-300 ukusuka endaweni yokulondoloza imvelo yaseKampina kanye neNqaba yaseNemelaer. Ngaphakathi kwebanga lokuhamba ngebhayisikili ungavakashela idolobhana elimnandi lase-Oisterwijk elinamasimu alo amaningi, izitolo nezindawo zokudlela. I-B&B ixhumene nepulazi lethu. Ngakho uhlala endlini yethu. Sinezilwane ezifuywayo. Lezi azifakiwe ku-B&B.
I-B&B inamakamelo ama-3, anamathiselwe epulazini lethu. Igumbi lokuhlala, igumbi lokugezela elinebhavu, ishawa yokuhamba ngezinyawo kanye ne-sauna (€25.00 eyengeziwe ngokuhlala; izobhukhwa esizeni), igumbi lokulala elinombhede okabili onengubo yokulala kagesi ngesikhathi esibandayo. Umbhede owengeziwe ungabekwa ingane eneminyaka emi-3 kuya kweyi-13. (€25.00 ngobusuku obunye okwengeziwe) Kukhona isihlalo nekhabethe lokungena. Ibhulakufesi elinemikhiqizo yesifunda iyatholakala ku-B&B. Ekuseni kunesinkwa esisha esivela kuRobert. Ngakho-ke ungazikhethela ukuthi ufuna ukudla ngasiphi isikhathi ukudla kwasekuseni. E-B&B kukhona isiqandisi, iketela, umenzi wekhofi (ubhontshisi) kanye nompheki wamaqanda (isiphunga). I-B&B inomnyango wayo wokungena ngemuva kwepulazi kanye nethala elizimele. Uzothola ukhiye lapho ufika. Sinezilwane ezifuywayo, lezi azivunyelwe ku-B&B. Sinamakati ama-3, inja, izingulube ezincane ezi-2 nezinkukhu. Sinamabhayisikili aqashwayo, okuhlanganisa ibhayisikili likagesi elingu-1. (€10.00 ngokuhlala/ibhayisikili likagesi €15.00 ngokuhlala)
Uzohlala epulazini elithi 'De Lieve Wies', elisendaweni ebanzi. Le ndawo ingamamitha angama-300 ukusuka endaweni yokulondoloza imvelo yaseKampina kanye neNqaba yaseNemelaer. Ngaphakathi kwebanga lokuhamba ngebhayisikili ungavakashela idolobhana elimnandi lase-Oisterwijk elinamasimu alo amaningi, izitolo nezindawo zokudlela. Sinamabhayisikili aqashwayo (1 kagesi) kanye ne-tandem. Sihlala phakathi kwamapulazi amabili obisi. Uma ungathanda ukubheka amathole, singabuza kusengaphambili komunye wabalimi. Kukhona nepulazi leNyathi eduze kwase-D'n Buff. Kufanelekile ukubheka lapha. (kuyasebenza futhi lapha: sicela ubonise kusengaphambili ukuze sikwazi ukuxoxa ngakho nomlimi) Imikhiqizo yethu yesifunda ivela lapha futhi sincoma kakhulu iyogathi.
Ake sizazise: singoMaarten no-Eva futhi sihlala namadodakazi ethu u-Wiesje kanye no-Lieve kwa-'De Lieve Wies'. Sizokwenza konke esingakwenza ukwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki. Sivame ukuba sekhaya futhi sizungeze indlu. Zizwe ukhululekile ukusithinta ukuze uthole imibuzo. Singatholakala nangocingo.
Ake sizazise: singoMaarten no-Eva futhi sihlala namadodakazi ethu u-Wiesje kanye no-Lieve kwa-'De Lieve Wies'. Sizokwenza konke esingakwenza ukwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki.…
Hlola ezinye izinketho ezise- Boxtel namaphethelo